Zvakanakira nezvayakaipira zveSocial Media Kushambadzira Martech Zone
Izvo zvayakanakira nezvayakaipira zveSocial Media Kushambadzira
Svondo, Gunyana 21, 2014 Douglas Karr
Pfungwa yeiyo infographic ndeye zvakanaka nezvakaipa, asi ini handizive kuti yakarova mbambo mumusoro. Izvo zvakanakira (zvakanaka) zvese zvinoverengeka zvine hungwaru zvinotsigira zvemasocial media kushambadzira, asi iyo Cons inotaura nemikaha pakunzwisisa, zano uye ongororo kupfuura kushambadzira nepakati. Ngatitorei ivo imwe panguva.
50% yeC-Suite haina kugutsikana yehuwandu hwemagariro evanhu. Izvi zvinogona kuve akati wandei nyaya. Vashandi vanogona kunge vasina kunyatso kuyera kukanganisa uye nekupa iwo akakodzera mishumo kuC-Suite yavo. Ivo zvakare vanogona kunge vasiri kuziva iyo yakareba-kwenguva mhedzisiro yekutaurirana zvinobudirira nevateereri vako vezvemagariro uye iyo mabhenefiti akanyanya kuoma kuyera.
Zvemagariro midhiya chete nhoroondo ye1.14% yeese e-commerce traffic. Ndiri kufonera zvisirizvo pane izvi nezvikonzero zvinoverengeka. Kutanga uye pamberi pezvese, vanhu vazhinji vari kushandisa manyorerwo kuyanana nevezvenhau. Iyi haisi nhamba diki… kusvika pa90% yako magariro enhau anotumirwa anogona kunge asina kuyerwa mukati mean analytics nekuti ivo vari kuuya kunongedzo yakananga kubva kuapp. Pasina kutaura nezve simba uye kuwanikwa kunopihwa nevezvenhau. Iko kushandurwa kunogona kusazoitika kubva mukubatana kwakananga - asi munhu wese anoziva izvozvo Shoko reMuromo ine simba rakakura pazvinhu nemasevhisi atinotenga - uye zvemagariro iWOM.
85% emakambani haabatanidze zviitiko zvehukama nemhedzisiro yebhizinesi. Sezvo na # 1, ichi hachisi chinhu chakashata nezveshambadziro yemagariro enhau, iyi inyaya yemukati yekambani. Iko kugona kwekutaurirana zvinobudirira, kuita, kurera, kusimudzira, kuunganidza mhinduro uye kupa wega kubata kwako nevatengi vako kunoshanda kwazvo nevezvenhau vezvenhau. Kana makambani asiri kuishandisa, ndiyo mhosva yavo… kwete iyo yekushamwaridzana.
Email ichiri kukunda mashandiro enhau maererano neshanduro 40 kusvika 1. Pasina kupokana… asi kana uine email kero yemumwe munhu, zvinoreva kuti watove nehukama navo! Zvemagariro zvinopa mukana wekuvaka hukama hwakakwana kuunganidza iyo email kero! Isu tinogovana izvi zvinyorwa paMartech pasocial pavanogovaniswa… ipapo vanhu vanouya kune yedu saiti uye kusaina email! Iwe haugone kuenzanisa maapuro nemaorenji seizvi.
Masocial media mapurogiramu macMOs '6th-chinzvimbo zvinonetsa (58 muzana). Yavo yekutanga kuvandudza maitiro uye kuenda nhare. Ini handisi kuzoshoropodza iyi stat… social media kuve iri pamusoro nhanhatu nyaya inokuratidza huremu hwainazvo pamusoro pedzimwe nzira Chinyorwa chimwe pane izvi, hazvo… Zvemagariro ndeyeMafoni… Sei iwe uchifunga kuti uri kutora yako saiti nhare yakagadziridzwa? Kutsvaga? Hongu… asi zvemagariro zvakakosha zvakare.
Izvi zvitsva OutMarket infographic inoongorora pfungwa yekuti pasocial media inofanirwa-kuve nemhando dzemhando nhasi, asi chokwadi nezvekuti nei maCMO achizvibvunza uye kuti ndeapi masimba uye kusasimba kwechokwadi. Ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvekushambadzira zvemagariro? Tarisa izvo zvakanaka uye ubate pachako kumusana kuti zviite zvakakosha mukati mesangano rako. Wadaro, tarisa pane zvakaipa uye uteedzere matipi edu matatu kuti uve nechokwadi chekuti uri kuratidza kukosha kwemagariro uye kuisunga kumhedzisiro.
Tags: bhizinesi kpiszviitiko zvebhizinesic-Suiteecommerce trafficemail inopfuura zvemagariro midhiyaemail maringe nevezvenhaunharembozhaOngororo dzepamhepoonline videokushamwaridzanakushambadzira munharaundazvemagariro uye nharezvekutengeseranakusangana munharaundazvemagariro vezvenhau zanopasocial media kukoshavanoona tv
Nzira shanu dzekutengesa mabhenefiti kubva kuHyperlocal Social Monitoring
Sep 29, 2014 na4: 43 PM
Ini ndinofanira kubvumirana pane chirevo nezve kuzivikanwa kwekukosha kwesocial media kushambadzira. Makambani mazhinji haazive kukanganiswa kunoitwa nevezvenhau kushambadzira, kana kushayikwa kwayo, pabhizinesi ravo.
Dec 24, 2014 pa 5: 31 AM
Anodiwa Douglas yako kuenzanisa pakati pezvakanaka nezvakaipa pamusoro pezvemagariro enhau kushambadza kwakarova chaizvo. Chaizvoizvo ini ndakabvisa kusanzwisisika kwangu kuburikidza nekuenzanisa kwako nezve zvimwe zvinhu zvandakanga ndambove nazvo mupfungwa dzangu.